मुलुकभर एक हजार तीन सय ५९ जनामा कोरोना संक्रमण : RajdhaniDaily.com -
Home भर्खरै मुलुकभर एक हजार तीन सय ५९ जनामा कोरोना संक्रमण
काठमाडाैं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप एक हजार तीन सय ५९ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कोभिड- १९ सम्बन्धी नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा चार सय ६४ महिला र ८ सय ९५ जना पुरुष गरी कुल एक हजार ३ सय ५९ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको जानकारी दिए ।
आज थपिएका संक्रमितसँगै देशभर कुल संक्रमितको संख्या ४४ हजार नाघेको छ । आजसम्म ४४ हजार दुई सय ३६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
बिचार राजधानी संवाददाता - March 10, 2021 0
बागलुङ । ऋतु फेरिएर हिउँदे अन्नपात भित्राउनुपूर्व ताराखोला गाउँपालिका–२ अर्गलमा बाली पूजाको रौनक चल्थ्यो । बाली पूजालाई ‘चैते’ र ‘ठूलो पूजा’समेत भन्थे, पाकापुराना ।...
Editor-Picks Sushila Bishwokarma - August 17, 2020 0
देशको राजधानी सहर काठमाडौंमा ढलको पानी परीक्षण गर्दा कोभिड–१९ भाइरस भेटिएपछि अब यो महामारी आम भई जनस्तरमा व्यापक रूपमा फैलने आशंका बढेर गएको छ...
Exclusive Kumar Raut - October 2, 2020 0
लन्डन । न्यूक्यासललाई २–० ले पराजित गर्दै साउथ हेमटन इग्लिस प्रिमियर लिगको शीर्ष स्थानमा पुगेको छ । शनिबार बिहान सम्पन्न खेलमा साउथ हेमटनका लागि...